Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Lufthansa Group dia nanambara ny Lehiben'ny paikadin'ny tetikady vaovao
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Mafana Alemana • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Jörg Eberhart dia nanendry ny Chief Chief Officer of Lufthansa Group
Jörg Eberhart dia handimby an'i William Wilms, izay notendrena ho amin'ny Birao Mpanatanteraka ao Lufthansa Technik tamin'ny 1 septambra 2021.
Lufthansa Group dia nanambara fanendrena mpanatanteraka vaovao.
Lehiben'ny fampandrosoana paikady sy fandaminana vaovao voatondro.
Jorg Eberhart dia handray ny toerana amin'ny 1 Novambra 2021.
Amin'ny 1 Oktobra 2021, Jörg Eberhart, CEO an'ny Air Dolomiti amin'izao fotoana izao, dia handray ny toeran'ny "Head of Strategy & Organizational Development" ao amin'ny Lufthansa Group. Izy no handimby an'i William Wilms, izay voatendry ho amin'ny Birao Mpanatanteraka ao Lufthansa Technik tamin'ny 1 septambra 2021.
Jörg Eberhart dia efa filoham-pirenena sy talen'ny CEO Air Dolomiti nanomboka tamin'ny 2014. Nandritra io fotoana io dia mpikambana tao amin'ny Birao Mpanatanteraka ao Lufthansa CityLine ihany koa izy. Talohan'io dia nitana andraikitra fitantanana maromaro izy Vondrona Lufthansa izay nahitana ny maha anisan'ny fananganana Aerologic GmbH sy ny fampiharana ny tetikasa SCORE.
Jörg Eberhart dia nianatra momba ny fitantanan-draharaha tao amin'ny University of Tübingen ary manana fahazoan-dàlan'ny mpanamory fiaramanidina ho an'ny Airbus A320.
Ny Vondrona Lufthansa dia vondrona fiaramanidina misy fiasa manerantany. Miaraka amin'ny mpiasa 110,065, ny Vondrona Lufthansa dia nahazo fidiram-bola mitentina EUR 13,589m tamin'ny taona ara-bola 2020.
Ny Lufthansa Group dia misy ny fizarana Network Airlines, Eurowings ary Aviation Services.
Ny serivisy fiaramanidina dia misy ny fizarana Logistics, MRO, Catering ary orinasa fanampiny ary ny asan'ny vondrona.
Ity farany dia misy koa Lufthansa AirPlus, Lufthansa Aviation Training ary ireo orinasa IT. Ny sehatra rehetra dia mitana toerana lehibe eo amin'ny tsenany avy.